Google On dia Google WiFi | Androidsis
Alohan'ny hanombohan'ny fandefasana ireo singa voalohany an'ny fitaovana Google Wi-Fi vaovao amin'ireo mpividy voalohany tsy manam-paharetana dia nanangana a fanavaozana ny fampiharana anao «Google On» amin'ny terminal Android izay mihevitra ny fanovana ho an'ny antokom-pinoana vaovao sahady antsoina ankehitriny «Google Wifi» ary dia vonona hampiasaina amin'ireo router farany natombok'i Google.
Ilay kinova Google On vaovao, ankehitriny Google Wifi, tsy misy fanovana maro amin'ny resaka fampiasa fototra, na izany aza, ny vaovao lehibe dia izao ilay fampiharana nohavaozina Mamela ny mpampiasa handrindra ny singa fitaovany Google Wi-Fi manerana ny trano, ankoatry ny famelana ny fikirakirana sy ny fitantanana ireo fitaovana Google teo aloha izay nanana fiasa mitovy amin'izany.
Iray amin'ireo fiasa miavaka indrindra amin'ny kinova vaovao an'ny fampiharana Google WiFi dia izany mamela ny iray amin'ireo telo amin'ireo fitaovana ireo azo alamina manerana ny trano amin'ny fomba tena tsotra.
Ny fampiharana, ao amin'ny kinova nohavaozina, dia nahazo fiovan'ny hatsarana kely ihany koa satria efa mampiasa ny sasany izao feo maivana kokoa ary manana koa kisary vaovao ho an'ny Launcher. Ho fanampin'izay, Google dia nampihatra kely fandaminana indray ny app mba hitondrana ireo tena lahasa ho an'ny faritra malaza eo amin'ny efijery ary ho azo haingana kokoa amin'ny alàlan'ny kiheba telo. ny Fanohanana Wifi Pause, zavatra ahafahan'ny mpampiasa manafoana vonjimaika ny fidirana amin'ny Internet amin'ny fomba voalahatra sy natao ho an'ny tsirairay amin'ireo fitaovana namboarina.
Google Wifi dia ampitaina hatramin'ny zoma lasa teo amin'ny alàlan'ny Google Play Store, fa azonao atao koa ampidiro ny APK amin'ny fitaovana ampiasainao raha mbola tsy hita ao amin'ny fivarotan'ny firenenao izany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » Google On dia Google WiFi ankehitriny